Etu esi tinye onye ọrụ na nchịkọta Google | Martech Zone
Etu esi tinye onye ọrụ na nchịkọta Google
Tọzdee, Nọvemba 8, 2018 Fraịdee, Nọvemba 9, 2018 Douglas Karr
Ọ nwere ike rụtụ aka na ụfọdụ usability okwu na gị software mgbe ị na-enweghị ike ime ihe dị mfe dị ka tinye ọzọ ọrụ… ahhh, ma nke ahụ bụ ihe anyị niile hụrụ n'anya banyere Google Analytics. Ana m ede ederede a maka otu n'ime ndị ahịa anyị ka ha nwee ike ịgbakwunye anyị dịka onye ọrụ. Gbakwunye onye ọrụ abụghị ọrụ kachasị mfe.
Nke mbu, ikwesiri ighaa na Admin, nke Google Analytics kpaliri aka ekpe nke ihuenyo igodo.
Nke a ga - ewetara gị na ihuenyo nchọgharị zuru oke maka akaụntụ gị. Họrọ ihe onwunwe ịchọrọ ịgbakwunye onye ọrụ, wee pịa Nchịkwa onye ọrụ.
Nke a ga-gbapụta a sidebar na ndepụta niile ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ị pịa akara aka na-acha anụnụ anụnụ tinyere n’elu aka nri, ịnwere ike ịgbakwunye agbakwunye ndị ọrụ ma tinye ikike ha.
Ọ bụrụ na ị na-agbakwunye mmadụ iji jikwaa Webmaster na Google Analytics, ị ga-enwerịrị ikikere niile. M ga-elele igbe nhọrọ iji gwa ha na ha nwere ohere ugbu a.
Nke a bụ vidiyo vidiyo si na Google nke enyere ogologo oge nke a bụ naanị aka ole na ole.
Tags: Google Analyticsonye nyocha googlegoogle analytics njirimara ikikenjikwa faili googlegoogle webmastersgoogle +otúnjikwa njikwa
Onye nchịkwa ụlọ ọrụ mebere
Anyị na-eme ọrụ inyeaka maka ndị nwere obere azụmaahịa. Anyị amalitela iji nchịkọta Google chọta banyere enweghị nleta, ndị ọbịa wdg. Daalụ maka ịkekọrịta ozi bara uru na anyị. Ọ bụ ezie na ị dere nke a maka otu n'ime ndị ahịa gị, ọ baara anyị uru karịa.
Dec 17, 2012 na 5:21 PM
Enwere m ike ịjụ ajụjụ? Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị profaịlụ ịhọrọ? Enweghị profaịlụ dị, yabụ na anyị enweghị ike itinye onye ọrụ ọhụụ na akaụntụ weebụsaịtị. You ma ihe kpatara na anyị enweghị ike itinye profaịlụ site na kọlụm aka ekpe na kọlụm aka nri?